Gịnị bụ ụyọkọ kpakpando: njirimara, ụdị, usoro na mkpa | Network Meteorology
N’eluigwe, e nwere ọtụtụ puku agglomerations nke kpakpando ndị nwere ọdịdị dị iche iche ma kwado ụdị ihe dị iche iche dị n’eluigwe. Ọ bụ banyere ụyọkọ kpakpando. Mgbe a jụrụ ya gbasara kedu ihe bụ ụyọkọ kpakpandoAnyị nwere ike ịsị na ha bụ nnukwu akụkụ dị na mbara igwe ebe kpakpando, mbara ala, igwe ojii, uzu ikuku, nebulae na ihe ndị ọzọ na-agbakọta ma ọ bụ na-emechi site na ọrụ nke ike ndọda.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị ihe ụyọkọ kpakpando bụ, gịnị bụ njirimara ya na ụdị ndị dị.
1 Gịnị bụ ụyọkọ kpakpando
3 Ofdị ụyọkọ kpakpando
4 Mmalite na mmalite
Ọ bụ otu ma ọ bụ nnukwu agglomeration nke kpakpando ebe a na-ahụ ụdị mbara igwe dị iche iche, dịka mbara ala, nebulae, ájá cosmic na ihe ndị ọzọ. Akụkụ bụ isi na ụyọkọ kpakpando nwere bụ ike ndọda nke na-ejikọ ihe ndị a niile. Havemụ mmadụ enwewo ike ịhụ ụyọkọ kpakpando n’akụkọ ihe mere eme anyị niile dị ka ihe ndị na-agbasa n’igwe abalị. N'ihi mmepe nke teknụzụ anyị nwere ma nwekwuo ozi gbasara ha.
Usoro mbara igwe anyị nke anyanwụ na mbara igwe dị na ya bụ otu ụyọkọ kpakpando a maara dị ka Milky Way. N’oge gboo, ọdịghị onye matara ihe eriri ọcha a gabigara mbara igwe gbasara na ọ bụ ya mere ha ji akpọ ya dị ka ụzọ mmiri ara ehi. N’ezie, aha ụyọkọ kpakpando na Milky Way sitere n’otu ebe. Ndị Gris kwenyere na kpakpando bụ mmiri mmiri ara ehi nke chi nwanyị Hera fesa ka ha na-enye Hercules nri.
Na Milky Way anyị nwere ike ịchọta nhazi nke ọtụtụ kpakpando na ájá interstellar. Ihe ndi ama ama bu nebulae na kpakpando. Eleghi anya, ha nọkwa na ụyọkọ kpakpando ndị ọzọ. A na-ekewa ụyọkọ kpakpando dịka nha ha na ọdịdị ha. Ha sitere na kpakpando dwarf nke nwere “nani” iri-njeri kpakpando rue na kpakpando buru ibu nke nwere otutu ijeri kpakpando. N'ihe banyere ọdịdị, ha nwere ike ịbụ elliptical, gburugburu (dị ka Milky Way), lenticular ma ọ bụ oge ufodu.
Na mbara igwe a na-ahụ anya, enwere ụyọkọ kpakpando 2 puku ijeri, ọtụtụ n'ime ha nwere diameters n'etiti 100 na 100.000 parsecs. Ọtụtụ n'ime ha jikọtara na ụyọkọ kpakpando na ndị a dị n'otu ụyọkọ.
A na-eme atụmatụ na ihe ruru 90% nke ụyọkọ kpakpando nke ọ bụla dị iche na ihe nkịtị; dị adị ma enweghị ike ịchọpụta ya, ọ bụ ezie na mmetụta ya nwere ike ịbụ. A na-akpọ ya ihe gbara ọchịchịrị n'ihi na ọ naghị enye ọkụ. Ka ọ dị ugbu a, ọ bụ naanị usoro iwu eji akọwara omume ụyọkọ kpakpando.
Mgbe ụfọdụ ụyọkọ kpakpando na-adaba n’ụyọkọ kpakpando ọzọ ma ha mechaa daa, ma ha buru ibu ma zaa aza nke na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nkwekọ ọ bụla adịghị n’etiti ihe ndị kpụrụ ha. Ma ọ bụ, na ntụle, ọdachi nwere ike ime. N'ọnọdụ ọ bụla, n'ihi na ike ndọda na-eme ka ihe kpuchie, njikọta na-edugakarị n'ọmụmụ nke kpakpando ọhụrụ.
Galaxies dị na mbara igwe ogologo oge tupu e kee usoro mbara igwe. Nke a bụ sistemụ nwere otutu ihe, dịka kpakpando, asteroids, quasars, ojii oghere, mbara ala, uzuzu, na ụyọkọ kpakpando.
E nwere ọtụtụ ụzọ iji kewaa ụyọkọ kpakpando, ma ọ bụ nke kachasị dị ka ọdịdị ha si dị.
Uyọkọ kpakpando Elliptical: bụ ndị ahụ nwere ọdịdị elliptical n'ihi nro ha nwere n'akụkụ otu. Ha mejupụtara kpakpando kasị ochie a na-ahụkarị n'ụyọkọ ụyọkọ kpakpando. N'ime ndị a maara ugbu a, ụyọkọ kpakpando ndị kasị ukwuu bụ ellipticals. E nwekwara ha nke pere mpe.
Ụyọkọ kpakpando gburugburu: bụ ndị nwere ọdịdị gburugburu. O nwere udi diski nke esisiri ike ma nwee ogwe aka ya gburugburu nke n’enye ya udidi ya. A na-etinye ume dị ukwuu n'etiti akụkụ ahụ ma ha na-ejikarị oghere ojii n'ime ya. Ihe niile dika kpakpando, mbara ala na uzuzu na-agagharị na etiti. Ndị nwere ogwe aka dị ogologo na-ewere ọdịdị dị ogologo nke na-adị ka barbell karịa okirikiri. N’etiti ụyọkọ kpakpando ndị a ka a na-eche na a ga-amụ kpakpando.
Ụyọkọ kpakpando ndị na-adịghị mma: ha enweghi mophology doro anya, kama ha nwere ike inwe kpakpando ndi n’eto eto amatabeghị.
Ụyọkọ kpakpando Lenticular: ha nwere ọdịdị nke dị n’etiti ụyọkọ kpakpando na gburugburu elliptical. Enwere ike ịsị na ha bụ diski na-enweghị ogwe aka nwere obere ngwongwo interstellar, ọ bụ ezie na ụfọdụ nwere ike iweta ụfọdụ ego.
Peculiar: dị nnọọ ka aha ahụ na-egosi, e nwere ụfọdụ nwere ụdị ndị ọzọ na - adịghị ahụkebe. Ha dị obere na usoro nke nhazi na nha.
Mmalite na mmalite
Otú ụyọkọ kpakpando si malite ka bụ isiokwu nke arụmụka na-enweghị njedebe. Dabere na otu aha ahụ, ndị na-enyocha mbara igwe kwenyere na ha malitere ịmalite n'oge na-adịghị anya Ọdịda nnukwu igbawa. Ọ bụ mgbawa nke mbara igwe nke mere ka amụrụ ụwa. N’ime ihe ndị ahụ gbasasịrị, igwe ojii ndị ahụ jikọtara ọnụ wee jikọta ya n’okpuru ike ndọda, bụrụ akụkụ nke mbụ nke ụyọkọ kpakpando.
Kpakpando nwere ike ichikota uzo di iche iche ka uwa buru uzo, ma obu ikekwe buru uzo buru uzo ma kpakpando ndi di n'ime ha. Galayọkọ kpakpando ndị a dị obere karịa ka ha dị ugbu a ma nọrọ ibe ha nso, mana ka ha na-emekọ ihe ọnụ ma bụrụ akụkụ nke eluigwe na ala na-agbasawanye, ha na-eto ma gbanwee ọdịdị.
Ọtụtụ telescopes nke oge a enweela ike ịchọpụta ụyọkọ kpakpando ndị ochie, nke malitere obere oge mgbe Big Bang gasịrị. Milky Way nwere gas, uzuzu, ma ọ dịkarịa ala 100 ijeri kpakpando. Ọ bụ ebe mbara ụwa anyị dị na ọ dị ka gburugburu ya. Ihe mejupụtara ya bụ gas, uzuzu, ma ọ dịkarịa ala, ijeri kpakpando 100 ijeri. N'ihi oke ígwé ojii nke uzuzu na ikuku nke na-eme ka a ghara ịhụ ya nke ọma, a na-apụghị ịkọwapụta etiti ya. Otú ọ dị, ndị ọkà mmụta sayensị kwenyere na ọ nwere nnukwu oghere ojii, ma ọ bụ otu aka ahụ, oghere ojii nke nwere ọtụtụ puku ma ọ bụ nde nde igwe.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmatakwu ihe ụyọkọ kpakpando bụ na ihe e ji mara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Astron » Gịnị bụ ụyọkọ kpakpando